Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Saynisyahan ku taqasusay Nuclearka Iran oo xukun daldalaad ah lagu fuliyey (Daawo Sawirro)
August 22 2017 00:47:21
Saynisyahan ku taqasusay Nuclearka Iran oo xukun daldalaad ah lagu fuliyey (Daawo Sawirro)
Saynisyahan ku taqasusay Nuclerka oo u dhashay wadanka Iiraan ayaa la daldalay ka dib markii dowlada wadankaas ay ku eedeeysay inuu xog muhiim ah siiyey sirdoonka Maraykanka.
Shahram Amiri oo xirnaa illaa sanadkii 2010 ayaa hooyadii waxay sheegtay in meydka wiilkeeda la keenay magaalada uu ka soo jeedo isaga oo luquntiisu ay calaamad ka muuqato, taasoo muujinaysa in la daldalay.
Amiri ayaa meel qarsoodi ah lagu hayay kaddib markii uu ka soo noqday dalka Maraykanka oo uu sheegay in sirdoonkoodu ay qasab ku wateen, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inuu macluumaad badan ka hayay barnaamijka Nukliyeerka Iran.
Amiri oo dhashay sanadkii 1977, ayaa la waayay kaddib markii uu xaj u tagay magaalada Maka 2009-kii, wuxuuna xili dambe ka soo muuqday Maraykanka isaga oo sheegaya in la afduubtay cadaadis dhanka maskaxda ahna lagu saaray in uu CIA-da siiyo macluumaad xasaasi ah.
Video uu soo diray isagoo Maraykanka jooga ayuu sheegay in la geeyey guri uusan garanaynin meel uu ku yaallo ayna saraakiisha sirdoonka Maraykanku ku dureen cirbado uusan garaneynin oo ogaalkiisa wax badan ka bedeshay.
Muuqaal kale ayuu ku sheegay in uu ka soo baxsaday maxbuusnimadii Maraykanka, Tehran ayuuna ku soo noqday 2010-kii isaga oo sidii halyey loo soo dhaweeyay, iyadoo saraakiil Maraykan ah ay waagaas sheegeen in Amiri uu iskii u soo baxay uuna Maraykanka siiyay macluumaad faa’iido badan.
Xabsi dheer ayaa waxaa ku xukuntay maxkamad ku taalla Tehran ka dib markii dowlada Iiran ay ogaatay in Amiri uu xog badan oo ku saabsan nuclearkeeda siiyey sirdoonka Maraykanka iyadoo qoyskiiisu sheegeen xiligaas iney noloshiisa u cabsanayaan.
· Caydiid on August 07 2016 ·